Zavo-tsetroka Ao Santiago · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2017 5:04 GMT
Misy fiantraikany amin'ny olom-pirenena ny fahalotoan'ny rivotra rehetra. Ferana ny fiara ary voarara avokoa isan-taona ny akora miteraka etona raha tsy manana fanadiovan-drivotra matanjaka ianao. Mandritra ny hamehana , raràna tsy hanao fanatanjahantena ny sekoly ary tsy maintsy manatsahatra ny miliny ny orinasa sasany. Soa ihany fa miasa ny drafitry ny governemanta momba ny tontolo iainana. Fanairana miisa 4 sy hamehana mialoha miisa 2 ihany no voarakitry ny CONAMA (ES), Vaomieran'ny Tontolo iainana izay manambara ny tondro ambany indrindra hatramin'ny taona 1997.
Ao amin'ny resadresaky ny gazetinay ny zavo-tsetroka, saingy tsy dia hita loatra ao amin'ny blaoginay izany. Nitondra ny olan'ny zavo-tsetroka ihany koa ny mpitsidika nandalo an'i Santiago. Ao amin'ny ” Charlies Travels “, ny zavo-tsetroka ao Santiago dia voafaritra ho “Toy ny mandeha an-tongotra ao anaty toeram-pisotroana feno setroka indraindray, kanefa farafaharatsiny kosa mba mahomby ny fitaterana.” Hoy i Alison raha nanoratra hoe “ny zavo-tsetroka no hany voka-dratsin'ny tanàndehibe , lohataona izao ary tsy misy ny rivotra na ny orana hanadio izany , hany ka hitanao eo amin'ny sary fa somary maloto izany”. Manana lahatsoratra maro momba ny zavatra niainany tao Shily ny bilaogin'i Anneopreis , tena tsara izany. Saingy, raha ny resaka zavo-tsetroka : “Matetika tsy afaka mahita ny ‘andes’ izay manodidina an'i Santiago iray manontolo ianao satria be loatra ny zavo-tsetroka, tena ratsy izany”
Kitiho eto (ES) hijery ny antsipiriany momba ny drafitry ny fahalotoan'ny rivotra ao amin'ny Vaomieran'ny Tontolo iainana .